Xiaomi Mi Note 10 waa mid rasmi ah oo dhowaan imaan doona | Androidsis
Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa jiritaanka Mi Note 10
Dhowr toddobaad Xanta ayaa nagu soo socota ee ku saabsan Xiaomi Mi Note 10. Waxay noqon doontaa nooc cusub oo dhexdhexaad ah oo nooca Shiinaha ah, kaas oo la filayay waxay imaan laheyd dhamaadka bishan. Ilaa iyo hada astaanta ma aysan xaqiijin wax, laakiin ugu dambeyntiina waxay xaqiijiyeen jiritaanka taleefanka shabakadooda bulshada.
Marka lagu daro xaqiijinta in Xiaomi Mi Note 10 ay dhab tahay, waxay nooga tagayaan dhowr xog oo muhiim ah oo ku saabsan telefoonka. Xogtani waxay sidoo kale na siineysaa dareen ah in taleefankan cusub ee nooca Shiinaha ah waxay noqon doontaa nooc caalami ah oo ka tirsan Xiaomi CC9 Pro, oo si rasmi ah loo soo bandhigi doono goor dhaw.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa la xaqiijiyay in Xiaomi Ni Note 10 waa mid dhab ah oo ay ku imaaneyso shan kamaradood oo gadaal ah. Kaamirooyinkaas waxaa ka mid ah inaan ka helno 108 MP shidma weyn, kaas oo ballan qaadaya inuu ka mid noqon doono walxaha xiddiggan ee taleefankan cusub ka socda soo saaraha Shiinaha. Qeexitaannada qaarkood ee durba noogu muuqda kuwo na yaqaan.
Soo bandhigida Kaameerada PARAN 108MP ee adduunka. Xilli cusub oo kaamirooyinka casriga ah ayaa hadda bilaabmaya! # MiNote10 #DareTo Discover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL
- Xiaomi #MiMIXAlpha (@Xiaomi) October 28, 2019
Tan iyo si hufan Xiaomi CC9 Pro wuxuu lahaan doonaa dareeraha weyn ee 108 MP, sida lagu xusay dhowr toddobaad. Intaa waxaa dheer, in saacadihii ugu dambeeyay la xaqiijiyay in taleefankan uu lahaan doono shan kamaradood oo gadaal ah. Marka waxaad moodaa inaan isla qalab ka hadlayno.
Sidaa darteed, wax waliba waxay muujinayaan taas Xiaomi Mi Note 10 wuxuu noqon doonaa nooca caalamiga ah ee CC9 Pro. Baaxaddaani waxaa laga bilaabay Shiinaha oo keliya, halka magacyo kale loo adeegsaday bilaabitaankeeda caalamiga ah. Xaalad u muuqata inay markale ku soo noqnoqonayso kiiskan mar labaad.
Lama sheegin waqtigaan la soo bandhigi doono Xiaomi Mi Note 10 CC9 Pro waxaa la soo bandhigi doonaa Nofeembar 5. Markaa waxay noqon kartaa isla maalinta qaabkan si rasmi ah loo sameeyey. Waa inaan sugnaa shirkadda lafteedu inay macluumaad dheeraad ah naga siiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa jiritaanka Mi Note 10
Qaar ka mid ah Pixel 4 waxay leeyihiin dhibaatooyin gaabis ah